येशू एक्लो हुनुहुन्नथ्यो, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
यरूशलेम बाहिर एक कपटी पहाडमा क्रूसमा समस्या भोग्ने मानिस मारिए। उहाँ एक्लो हुनुहुन्नथ्यो। त्यो वसन्तको दिनमा यरूशलेममा उहाँ एक्लै समस्यामा पर्नुहुने थिएन।
“मलाई ख्रीष्टसँगै क्रूसमा टाँगिएको थियो” भनी प्रेरित पावलले लेखे (गलाती २:२०), तर पावल मात्र थिएनन्। "तपाईं ख्रीष्टसँग मर्नुभयो," उनले अरू इसाईहरूलाई भने (कलस्सी १:१:2,20)। “हामी उहाँसँगै गाडियौं” भनी उनले रोमीहरूलाई लेखे (रोमी :6,4:११)। यहाँ के भइरहेको छ? यी सबै मानिसहरू साँच्चिकै यरूशलेमको पहाडमा थिएनन्। पावलले यहाँ के भनिरहेको छ? सबै इसाईहरू, चाहे तिनीहरू जान्दछन् कि छैनन्, ख्रीष्टको क्रूसमा साझेदार हुन्छन्।
के तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो जब तपाईंले येशूलाई क्रूसमा टाँग्नु भयो? यदि तपाईं एक ईसाई हुनुहुन्छ भने, उत्तर हो हो, तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग थियौं यद्यपि हामीलाई यो समयमा थाहा थिएन। त्यो मूर्खता जस्तो लाग्न सक्छ। यसको वास्तविक अर्थ के हो? आधुनिक भाषामा हामी भन्दछौं कि हामी येशूसँग चिन्यौं। हामी उसलाई हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा स्वीकार्छौं। हामी हाम्रो पापको भुक्तानीको रूपमा उसको मृत्युलाई स्वीकार गर्दछौं।
तर त्यो सबै होइन। हामी पनि स्वीकार गर्दछौं - र भाग लिन्छौं - उसको पुनरुत्थान! «परमेश्वरले हामीलाई उहाँसंगै बिउँताउनुभयो» (एफिसी २:१:2,6)। पुनरुत्थानको बिहान हामी त्यहाँ थियौं। «परमेश्वरले तपाईंलाई उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो» (कलस्सी १:१:2,13)। Christ तपाईं ख्रीष्टसँगै उठ्नुभयो » (कलस्सी १:१:3,1)।
यदि हामीले क्रूसमा टाँगिएको प्रभुको साथ पहिचान गर्न राजी भयौ भने ख्रीष्टको कथा हाम्रो कथा हो। हाम्रो जीवन उसको जीवनसँग जोडिएको छ, पुनरुत्थानको महिमा मात्र होइन तर उसको क्रूसमा भोग्ने पीडा र पीडा पनि। के तपाईं यसलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? के हामी ख्रीष्टको साथमा मर्छौं? यदि हामीले यो पुष्टि गर्छौं भने हामी उहाँसँगै महिमामा पनि हुन सक्छौं।
येशूले मर्नुभयो र फेरि उठ्नु भन्दा धेरै गर्नुभयो। उनले धार्मिकताको जीवन बिताए र हामी पनि यस जीवनमा बाँडिरहेका छौं। हामी अवश्य पनि सिद्ध छैनौं - बिस्तारै सिद्ध पनि छैन - तर हामीलाई ख्रीष्टको नयाँ, फ्लोफ्लो जीवनमा भाग लिन बोलाइएको छ। पावलले यी सबै कुराको सार बताउँछ: “त्यसैले हामी उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युमा गाडिन्छौं, ताकि बुबाको महिमाले मृत्युबाट बिउँताइएका ख्रीष्टजस्तै हामी पनि नयाँ जीवनमा हिंड्न सक्छौं।” उहाँसँगै गाडिएको, उहाँसँगै हुर्केको, उहाँसँगै बस्नुभयो।
यो नयाँ जीवन कस्तो देखिनु पर्छ? "त्यसोभए, तिमी पनि विचार गर कि तिमी पापको कारणले मरेका छौ र ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वर बाँचिरहेका छौ। त्यसोभए पापलाई तपाईको शरीरमा शासन गर्न नदिनुहोस्, र उसका चाहनाहरूलाई नमान्नुहोस्। पापको निम्ति आफ्नो अंगलाई अन्यायको हतियार नदेऊ, बरु तिमी आफैलाई परमेश्वरलाई अर्पण गर जो मरेका थिए, तर अहिले जीवित छन्, र आफ्ना अंगहरूलाई न्यायका हतियारहरू जस्तै परमेश्वरलाई देओ। (पद 11-।)
यदि हामी येशू ख्रीष्टसँग चिन्यौं भने हाम्रो जीवन उहाँकै हो। «हामी विश्वस्त छौं कि यदि कसैको लागि सबै मर्दछ भने तिनीहरू सबै मर्दछन्। यसैले ऊ सबैका लागि मर्‍यो, ताकि त्यहाँ बस्नेहरू अब बाँच्‍नेछैन, तर जो मर्‍यो र तिनीहरूका लागि बौरे। (१ कोरिन्थी १२: -2-।)
जसरी येशू एक्लो हुनुहुन्न, त्यसकारण हामी एक्लो छैनौं। यदि हामी ख्रीष्टसँग चिन्यौं भने हामी उहाँसँगै गाडिनेछौं, हामी उहाँसँगै नयाँ जीवनमा उठ्नेछौं र उहाँ हामीमा बस्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो परीक्षा र हाम्रो सफलताहरूमा हाम्रो साथ हुनुहुन्छ किनभने हाम्रो जीवन उहाँकै हो। उसले बोझ काँधमा राख्छ र उसले मान्यता प्राप्त गर्छ र हामी उहाँसँग उसको जीवन बाँड्न पाएको आनन्दको अनुभव गर्छौं।
पावलले यसको यी शब्दहरू बयान गरे: “मलाई ख्रीष्टसँगै क्रूसमा टाँगिएको थियो। म जीवित छु, तर अब म होइन तर ख्रीष्ट मभित्र बास गर्नुहुन्छ। किनकि म जे शरीरमा बाँचिरहेछु, म परमेश्वरको छोरामाथि विश्वास गर्छु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। (गलाती 2,20:१)।
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, “क्रूस तिमीमा लिएर आऊ, र मेरो पछि लाग। मसँग आफूलाई चिनाउनुहोस्। पुरानो जीवनलाई क्रूसमा टाँस्न र नयाँ जीवनलाई तपाईंको शरीरमा शासन गर्न दिनुहोस्। यो मलाई मार्फत होस्। मलाई तपाईं बस्न दिनुहोस् र म तपाईंलाई अनन्त जीवन दिनेछु।
यदि हामीले हाम्रो पहिचानलाई ख्रीष्टमा राख्यौं भने हामी उहाँसँगै उहाँसँगै कष्ट र आनन्दमा साथ हुनेछौं।